သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး အကယ်ဒမီဆုကြေးအားလုံး ဒါရိုက်တာဝိုင်းအားကန်တော့. ~ .
သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး အကယ်ဒမီဆုကြေးအားလုံး ဒါရိုက်တာဝိုင်းအားကန်တော့.
3:10:00 AM အနုပညာသတင်း
လက်ပံရုပ်ရှင်ဇတ်ကားဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အမျိုးသမီးဇတ်ဆောင် အကယ်ဒမီဆုကို ရရှိသွားသူ သရုပ်ဆောင် ဖွေးဇွေးက ၎င်းရရှိသည့် ဆုကြေးငွေအားလုံးကို လာရောက်ကန်တော့ခဲ့ကြောင်း လက်ပံဇတ်ကားကို ဖန်တီးသူဒါရီုက်တာ ၀ိုင်းက သူ၏ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နာတွင်ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
"အကယ်ဒမီဆုပိုင်ရှင်ဖွေးဖွေးက...သူရတဲ့ ဆုကြေးငွေအားလုံးကို လာရောက်ကန်တော့သွားပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ' ဟုသူ၏ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နာတွင် ဆုကြေးငွေစာရင်းပါ အိတ် အစိမ်းရောင်ပုံနှင့်အတူ ရေးသားထားသည်။
ထို့အပြင်ဒါရီုက်တာဝိုင်းက"တကယ်တော့သူရတဲ့အကယ်ဒမီရုပ်တုကိုပါကန်တော့တာပါ...ကျနော်က လက်မခံခဲ့တာပါ..."ဟု သူ၏ဖေ့ဘုတ်မိတ်ဆွေတို့အား ပြန်လည်ပြောကြားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲတွင် လက်ပံရုပ်ရှင်ဇတ်ကားဖြင့် ဒါရီုက်တာဝိုင်း အကယ်ဒမီရရှိနိုင်ကြောင်း ပိရီသတ်များက ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွက်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆုကို ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး)က ဥ ဇတ်ကားဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။